How to unlock iphone — MYSTERY ZILLION
iphone unlock လုပ်တာနဲ ့ပက်သက်လို ့သိသလောက်ပြောပြပမယ်။
iphone 2G ပဲဖြစ်ဖြစ် 3Gပဲဖြစ်ဖြစ် iphone ဆိုတာနဲ့Apple ကထုတ်မှန်းလူတိုင်းသိပါတယ်။
အဲဒီ Apple က သူ ့ဖုန်းလုပ်ချင်တိုင်းပေးမလုပ်ပါဘူး။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် 3rd party application တွေကိုပေးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို ့ရအောင် jailbreak(ပိတ်ဆို ့ထားတာတွေကနေ အရင်ဆုံးဖောက်ထွက်ခြင်း)လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် dev-team ကနေ pwange tool ကို ကြိုးစားပြီး ပိုက်ဆံမရလဲရေးပေးထားပါတယ်။
jailbreak လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှ unlockဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ပါတယ်။
unlock လုပ်မယ်ဆို wi-fi လိုလာပါတယ်။ wi-fiမရှိရင်unlock မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
wi-fiရပြီဆိုရင် apt9.yellowsn0w.com ကနေ yellowsnowဆိုတဲ့ unlocker software ကိုiphone ကနေ download လုပ်ရပါတယ််။ iphone နဲ ့ပဲ download လုပ်လို ့ရပါတယ်။
unlock လုပ်ပြီးရင် anysim card ထည့်သုံးလို ့ရပါပြီ။
Warning အခုကျွန်တော်ပြောပြထားတာက iphone ကို unlock လုပ်မယ်ဆိုရင်သိရမယ့် general knowledgeပါ အပြည့်အစုံမဟုတ်သေးပါဘူး။
ိိdetail ကိုသိချင်ရင် iclarifed.com မှာ၀င်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
iclarified မှာ၀င်ဖတ်လို ့သေချာနားမလည်ရင် unlock စမ်းမလုပ်ပါနဲ ့။
sim unlock ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ sim unlock ဖြစ်ရင်အနော်လဲမရှင်းတတ်ပါ။ ကြားတာတော့ဒီမှာပြန်ဖြေရှင်းလို ့မရပါ။ ကျွန်တော့ iphone လေးကတော့ sim unlock ဖြစ်သွားလို ့သုံးလို ့မရသေးပါ။ ကျွန်တော့လိုဖြစ်မှာဆိုးပါတယ်။
iclarified.com မှာလေ့လာလို ့နားမလည်ရင် မေးနိုင်ပါတယ်။
(:((:(( ..yellowsnow made my sim locked....too....So i have to renew my sim ...it costs me $100....:14:
ဘယ်လိုများsim lockလုပ်သွားလို ့ပါလဲခင်ဗျာ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တိတိကျကျလေးပြောပြစေချင်ပါတယ်။ နောက်လူတွေမမှားရအောင်လို ့ပါ။ ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးလဲညွန်ပါဦးဗျို ့။
ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့နည်းလမ်း = go to MPT...:D
အဆင်ပြေသွားပါသလားအစ်ကို။ နည်းနည်းလောက်ပြောပြစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ iphone လဲ sim locked ဖြစ်နေပါတယ်။ iphone springboard ကိုလုံး၀၀င်လို ့မရပါဘူး။ ကူညီပါအုန်းအစ်ကို။
Iphone 3G ကို Unlock လုပ်နည်း အသေအချာ သိသူများ ရေးပေးကြပါဦး..။
ဟိုတနေ့က.. quickpwn နဲ့.. jailbreak လုပ်တာ.. ပီးသွားတယ်..ဒါပေမဲ့..တက်မလာဘူ..
Logo ပဲပေါ်တော့တယ်..။ အဲဒါနဲ့...ဆေးခန်းပို့လိုက်ရတယ်...။
Itouch ကို jailbreak လုပ်တာနဲ့. နည်းနည်းကွာသလိုပဲ.. itouch တုံးက အဆင်ပြေတယ်..
Itouch 3.0 အတွက်.. Jailbreak ထွက်ရင်လည်း ..ပြောကြပါဦး...............:((:((:((
အောက်ပါ Tutorial နဲ ့iphone 3G firmware 3.0 ကို jailbreak လုပ်လို ့ရပါတယ်။
jailbreak step အထိပဲရပါသေးတယ်။ unlock လုပ်ဖို ့အတွက် Ultrasnow ဆိုတဲ့ unlock application လိုအပ်ပါတယ်။ Ultrasnow ကတော့မကြာခင်ရပါတော့မယ်။ ကဲပြောနေကြာနေပါတယ်။ စကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း အဲယောင်လို ့လေ။ စကြမယ်။
အရင်ဆုံး redsnow ဆိုတဲ့ jailbreak software ကို ဒီမှာ download ဆွဲလိုက်ပါ။
iphone latest 3.0 firmware ကိုလဲ ဒီကနေ download ဆွဲလိုက်ပါ။
redsnow software ကို unzip လုပ်ပြီး Pwnage folder ထဲမှာထားပေးပါ။
ပြီးရင် iphone ကို computer နဲ ့ချိတ်လိုက်ပြီး iTune ကို open ထားပါ။
iTune ရဲ ့left pannel မှာရှိတဲ့device list မှာ iphone ကို select မှတ်ပေးပါ။
ပြီးရင် shift ကိုနှိပ်ထားပြီး restore ကိုနှိပ်ပါ။
download ဆွဲထားတဲ့ firmware file ကို select လုပ်ပေးပြီး firmware ကို 3.0ကိုပြောင်းပေးပါ။
itune နဲ့firmware 3.0 ကို update လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် download ဆွဲထားတဲ့ redsnow.exe ကို run ပေးပါ။
ပြီးရင် redsnow ကပြောတဲ့ instruction တွေကိုလိုက်နာပြီး jailbreak လုပ်နိုင်ပါတယ်။